I-Chrome Kitchen Sink Faucet Ekhipha Isifutho
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela phansi Izicucu / WOWOW I-Chrome Kitchen Sink Faucet Ekhipha Isifutho
Kulinganiselwe ngo- 4.95 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 37 izilinganiso ikhasimende
(37 Izibuyekezo ikhasimende)
Donsela phansi ompompi abaxuba ekhishini 2310800C
· Nikeza i-wow-factor kunoma iyiphi ikhishi
· Idizayini yakudala neyamanje
Izinhlobo ezi-3 zamanzi, kufaka phakathi ingcindezi ephezulu ye-aqua-blade
· Kwenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme
Kubandakanya ikhithi yokufaka yokuzenzela ngokwakho
· Isiqinisekiso sezinsuku ezingama-90 sokubuyiselwa kwemali
SKU: 2310800C Categories: Ikhishi Faucets, Donsela phansi Izicucu Tags: 1 Imbobo, Chrome, Donsela Phansi
Uthole lokhu ukufaka esikhundleni sepompo yethu emfushane / ephansi coz sinenkinga yokuwasha amabhodwe aphakeme / amade futhi konke kuhle konke .. into engiyishintshayo ukufakwa kokushisayo nokubandayo okuzenzakalelayo ukudonsela kuwe kuyashisa futhi angikufuni coz nginezingane ngakho ngixhume i-hose eluhlaza okwesibhakabhaka ku-valve eshisayo i-hose ebomvu ku-valve ebandayo..konke okunye konke kuhle kakhulu thenga.
Ngidinga ukushintsha umpompi wami wakudala wasekhishini, inani lihle, ngakho-ke ngathenga ngaphandle kokungabaza. Isifutho sokudonsa phansi nezilungiselelo ezi-3 kumnandi! Isivumelwano esanelisa kakhulu!
Kubukeka futhi kuzwakala kumnandi kakhulu.
Ngisanda kuqeda ukufaka ompompi ekhishini lami. Kulula ukufaka futhi asikho isidingo sokubiza uchwepheshe. Kulula ukudonsa umlomo wesifutho phansi bese usivumela sibuyele emuva esibambeni. Kwenzekile nje ukuxhuma kwami ​​kokuphakelwa kusayizi ofanayo nale yunithi. Ephuzwini lentengo, lihle kakhulu.
Ukuqhathanisa le ompompi ngokumelene namagama amakhulu afana ne-Morn, Delta, njll imizwa nokubukeka kuyafana. Le ompompi kulula ukuyilawula ingcindezi namazinga okushisa kwamanzi.
Kuyinto enhle futhi ikhwalithi ifana nemibhobho ebiza kakhulu.Sifake le ompompi kusinki wethu wasekhishini. Kube ukufaka okulula futhi kwenziwe ngokungenaphutha kusukela lapho. Isiphetho kulula kakhulu ukusihlanza, simelana nokuklwebheka. Inendawo enhle yokufafaza futhi nesifutho sisebenza kahle futhi, akukho ukuvuza noma ukulenga phansi. Sithanda le ompompi entsha.
Ngemuva kokufunda zonke izibuyekezo, nginqume ukuthi sizozama le ompompi. Okwe- $$$ kubonakale kulifanele ithuba. Hewu! Sijabule kakhulu ngalompompi. Namanje awukholwa ikhwalithi yentengo. Ngingayincoma le ompompi kunoma ngubani ofuna ukuyithuthukisa noma ngabe isabelomali noma cha. Inani elikhulu, ukubukeka okuhle. Umsebenzi omuhle.
Umpompi omkhulu wentengo enkulu! Ngithengele ubaba wakwami ​​ompompi muva nje esitolo esikhulu sehardware cishe isikhathi esiphindwe kabili kunentengo yale mpompi. Ngingafakazela impela ukuthi ikhwalithi yale mpompi nokulula ukuyifaka ibingcono kunaleyo edlule engiyithengile. Iza nolayini bamanzi - hlala ubeka imigqa yakho yamanzi !!! Futhi okunamathiselwe kwesisindo kwakulula ukufaka. Sekukonke sijabule kakhulu ngompompi.
Indlu yami iyalungiswa, ngakho-ke ngidinga le ompompi. Izinsuku ezimbalwa ezedlule ezifakiwe. Isebenza njengoba kulindelwe. Akukho ongakhalaza ngakho Kungumkhiqizo olula kangako kepha usebenza kahle! Kukhulula impela isikhala esiningi kwikhawunta lapho ngifuna ukugeza isitsha noma ezimbili noma izinto ezingaphephile lapho kugezwa khona.
Bengingabaza kancane ngentengo nokuthi iqiniso bekungelona igama lomkhiqizo elikhulu. Ngihlale ngesaba ukwakheka kwamapayipi okushibhile okuhlobene nokwaphuka, ngoba uzosebenzisa izinkulungwane ukulungisa umonakalo ongahle ugcinwe ngumkhiqizo owengeziwe wama- $ 20 noma u- $ 30. Noma kunjalo, lo mkhiqizo omuhle! Umpompi wami wakudala womkhiqizo waseMelika uphuke entanyeni emicu, kusuka ekugqolweni. Ibhasikidi kumele ngabe kade lavuza, nezikulufi zangikhumula nami. Ngagcina sekufanele nginqume izintambo ezindala zamanzi ngaphula umpompi osele ukuze ngiphume. Lokho kwakuyiphupho elibi, futhi ngangithemba ukuthi kwakungafanekeli engangizokukhuthazelela. Kepha kwakungeyona. Ukufaka lokhu bekuhamba kahle futhi kulula. Isinki yami inokusetha izimbobo ezintathu ngakho-ke ngisebenzise ipuleti lesisekelo. Ngithanda amapuleti ayisisekelo amagwebu we-gasket esikhundleni sepulasitiki ezacile othola zona. Ngenkathi ngigaxa izinto phansi ungabona ukuthi igwebu livala izinto ngampela lishabalale emehlweni. Nginesiqiniseko sokuthi lokhu ngeke kugqwale njengeyami endala. Nami ngiyasithanda isiphetho, asikhangisi ukuthi siyamelana namabala kepha asiwatholi ngempela amabala amanzi noma izigxivizo zeminwe. Mhlawumbe ngoba kungenasici futhi akuyona i-nickel? Angiqiniseki, kepha lokho bekukuhle ukukubona futhi bekungalindelekile kuleli phuzu lentengo.
Ukukhathazeka enginakho kuphela lapho ngidonsa phansi ispout ukugeza izitsha ipayipi lomgodi / usinki oguqukayo kancane. Lokhu kungahle kube ngenxa yokuthi isinki yami iba insimbi engagqwali futhi. Angikhohlakele ezintweni zami ngakho angikhathazeki kakhulu kepha kuyinto engiyigcina ngemuva kwengqondo yami lapho ngenza izitsha. (Qaphela uma kungenzeka.)
Ngingakutusa lokhu kunoma ngubani! Kungani usebenzisa u- $ 100… $ 150… $ 200 etafuleni elincane esitolo esikhulu lapho ungakuthola khona lokhu ngengxenyenamba yentengo?
Ngaphambi kokuthenga lo mkhiqizo, ngifunde ngenombolo yezibuyekezo mayelana nokuhlangenwe nakho okubi okuvela kwamanye amakhasimende abalethe lo mkhiqizo. Kodwa-ke, nginqume ukuthi ngizame futhi kuze kube manje (izinsuku ezi-3 kuphela zokusebenzisa) konke kusebenza kahle ngaphandle kokukhipha okuphumayo.
Ngiyavuma, ngalwa nokufakwa kancane, kepha lokho bekungelona iphutha lalo mkhiqizo. Imiyalo icace bha, ngivele ngaba nephupho elibi lapho nginqamula wonke amapayipi ami amadala futhi esuswa. Lapho sengidlulile kuleso sithiyo, ukufakwa kompompi omusha kwakulula kakhulu.
Ngokuqondene nokusebenza, ikhanda elibanzi lokufafaza linengcindezi enkulu kimi. Kodwa-ke, ingcindezi kusethingi "yokusakaza" ibonakala iphansi kancane. Angazi noma ngabe lokhu kuyinkinga ngepayipi noma ekuphakelweni kwami ​​ngamanzi. Noma ngabe ikuphi, akuyona inkinga enkulu njengoba ngithanda ukuyibeka kusethingi ebanzi yokuphalaza nganoma iyiphi indlela.
Noma kunjalo, kukonke ngilinganise lo mkhiqizo kakhulu ngenxa yenani, ukufakwa okulula, nokubukeka okuhle. Uma nginezinkinga ngokuzayo, ngizohlela ukubuyekeza kwami ​​ukukukhombisa ngezibuyekezo.
Uma uqasha indawo le kuyindlela enhle yokuthuthuka kusuka kumpompi osinki ojwayelekile ovame ukungabi mkhulu oza nokuqashwa. Ungabeka emuva ompompi wakudala ngaphambi kokuba uhambe. Le ompompi ibilula kakhulu ukushintshela kuyo, ithathe i-hubby ngaphandle kwesikhathi. Isinki yethu eza nekhishi yayingenasifutho nesifutho esifushane esasihlala eduze kakhulu nesinki ngakho-ke noma ngabe usinki wawunezitsha ezimbalwa nje, kwakunzima ukuwasha. Le ompompi ijika i-WAY ephakeme isinikeza indawo eningi, futhi ine-sprayer okufanele ibe yindinganiso yawo wonke umpompi / amasinki ezikhathini zanamuhla. Impela bekungushintsho lomdlalo, kwenziwa ukuhlanza kwaba lula, futhi kulula ukuphuma uma siphuma ekuqashiseni kwethu futhi sifuna ukubuyiselwa imali yethu.
Kuthengwe lokhu ukuze kuthuthukiswe ezinye izibuyekezo zokuqasha.
Imvamisa lezi zinhlobo zokudonsa ompompi zingama- $ 100 + kusuka ku-homedepot naseLowes ngakho benginokungabaza ukuthi lokhu kungaba ikhwalithi enhle.
Kumele ngithi ngihlatshwe umxhwele kakhulu yikhwalithi yemali, isisindo siningi kakhulu sokudonsela ompompi ngaphakathi. Izindlela ezimbili zisebenza kahle kepha inkinobho yokumisa isikhashana ikukhahlela ukuthi ngikwazi ukuzwa ingcindezi yokusekela amapayipi kepha akwanele ukuthi ngikhathazekile ngakho.
Ukwakhiwa kwensimbi kuhlaba umxhwele kakhulu kuleli phuzu lentengo futhi azikho izinto ezizizwa zintekenteke.
Ukufakwa kulula, okuyingxenye eyinselele kuphela ngezikulufo ezinamathisela uphawu ngaphansi kosinki. Uma une-screwdriver esinamandla noma i-drill engasindi lokhu akuyona inkinga enkulu.
Sekukonke lokhu kuyinto engizobukeka ngiyithenga futhi ngokunye ukuqasha kwami ​​ngicabanga ukuthi lena izama isikhathi!
Kuthengwe enye yesibili yenye iyunithi, ukufakwa bekulula kakhulu futhi kwathatha cishe ama-30mins ngamandla wokuqinisa amandla ukuqinisa izikulufo ezihlanganayo ngaphansi kosinki.
Isinki yethu ayijule kakhulu futhi bengifuna indlela elula yokugcwalisa amabhodwe. Ngiyathanda impela ukuthi inezilungiselelo ezi-2 zokusakaza nokusakaza! Ngikufake lokhu (nokuphazamiseka) kahle ngaphansi kwehora. Ikhola yokukhiya inesikhala esivumela ukuthi iqhubeke ngaphandle kokuyinyathela phezulu. Isici esisodwa esihle sokufakwa ama-hoses amakwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka nokubomvu, okwenza ukuxhuma kube nomoya. Bengilokhu ngibheka ezitolo zamabhokisi zalolu hlobo lwompompi. Izintengo kumayunithi afanayo zazicindezela umkhawulo wesabelomali sami. Le ompompi inazo zonke izici ebengizifuna futhi ingumkhiqizo oqinile owakhiwe kahle. Intengo enhle, ompompi omkhulu futhi ngiyajabula ukuthi ngithenge lokhu!
Ngiyayithanda le ompompi okulula ukuyifaka isebenza kahle kakhulu kusinki wami wasekhishini ongaphelile intengo enkulu ingathanda ukuthenga enye njengesipho.
Le ompompi yayihloselwe ukugqoka ikhishi lesikhashana njengoba silungisa okwethu. Siyithanda kakhulu ukuthi sizoyisebenzisa esikhaleni esisha. Kuqinile kakhulu, ukwakhiwa kwekhwalithi, akukho izingcezu zepulasitiki. Ide ngokwanele, kulula kakhulu ukuyifaka, kulula ukuyisebenzisa, enezimo ezinhle ezivela kumbhobho wesifutho. Futhi konke ngengxenyana yezindleko zamagama "wegama", avame ukwenziwa ngopulasitiki abaningi. Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esihle kakhulu se- $$.
Ngangikhathazekile kancane ukuthi kuzobukeka ngathi "ipulasitiki eshibhile" kepha akunjalo! Ngakha ikhishi lami futhi umpompi ubukeka umuhle !!! Ngiyathanda ukuthi ngingashintsha ingcindezi yamanzi ngize ngime kancane ukugeleza kwamanzi lapho ngigcoba izitsha ezonga amanzi nemali ebhange lami lamanzi. Nginosinki ophindwe kabili ngakho-ke mkhulu futhi kulula.
Lokhu empeleni bekuwukuthenga okuhle kakhulu. Empeleni kwakulula kakhulu ukuyifaka. Ingxenye ebinzima kunazo zonke bekuwukususa umdlalo wokugcina ngoba ubumdala kakhulu futhi umkhulu. Kepha lesi silungiselelo sasibushelelezi ngempela, kulula ukusihlanganisa, futhi mhlawumbe sangithatha cishe isigamu sehora okungenani, kufaka phakathi ukuhlanza, ukuze yonke into ishintshwe. Ukujabulele ngempela ukusetshenziswa okulula nokukwazi ukushintsha kusuka kokushisayo kuye ekubandeni, ukusebenza kwe-spray, nokunwebeka. Ibhola lesisindo lihlakaniphile. Thanda lobu buchwepheshe nokuthi indlela yethu emisha ecindezela ngayo izinga lokuphila elingcono futhi elingabizi kakhulu.
Uhlatshwe umxhwele kakhulu yiyunithi. Isiphetho sihle. Ukuphela kwento engidinga ukuphawula ngayo isibambo siyazwela kakhulu futhi umuntu kudingeka aqaphele lapho evula ompompi njengoba ungathola amandla athe xaxa kunalokho okudingekayo. Ngaphandle kwalokho ngijabule kakhulu ngenkampani nokulandelela abakwenzile kumkhiqizo wabo. Singathenga futhi uma kunesidingo.
Ngiyayithanda ipompi yami entsha! Ngiyifake izolo ebusuku. Kwakungekho nzima kakhulu ngaphandle kokunamathisela ulayini wamanzi kulokho okwakulungisiwe. Uma ukwazi, namathisela ngaphambi kokufaka ompompi endaweni. Okwami ​​bekunzima ukukwenza ngoba isikhala esingaphansi kosinki wami siminyene kakhulu. Ngaphandle kwalokho kuhambe kahle futhi ngiyayithanda ipompi entsha!
Ngijabule kakhulu ngalo mkhiqizo. Kwakulula ukuyifaka. Sinezingane ezincane futhi kulula kakhulu ukuthi zizisebenzise, ​​nazo. Siphinde salandela izeluleko zomunye obukeza naye futhi sashintsha ukuxhumana okushisayo / okubandayo ukuze ukushisa kube ukuhlehlisa emuva nokubanda ukudlulela phambili. Isebenza kahle futhi ngingawuncoma nakanjani lo mkhiqizo !!
Kade ngifuna ukushintsha umpompi wami wakudala ekhishini isikhashana manje. Lesi sethi sihle ngokuphelele futhi sisebenza kahle kakhulu! Kwakuyinto encane ekhohlisayo ukufaka ukufakwa (ikakhulukazi ingxenye lapho kwakufanele ngiqinise echibini lokucwila - ngagcina ngokucela usizo komunye umuntu), kepha ngagcina ngilutholile futhi umpompi usebenza kahle! Ngiyalithanda ikhanda lepompo elihoxekayo lokufafaza umcengezi wosinki. Isethi yafika namagilavu ​​okotini amhlophe yize ingaqiniseki ngokuphelele ukuthi ayenzelwani. Ukupakisha kwakukuhle kakhulu, futhi ngangijabule kakhulu ngokuthenga kwami!
Angizange ngilindele ukuthi umpompi ngale ntengo ube muhle kanjena. Ngibona abanye abantu bekhononda ngokuzizwa kwepulasitiki kwalokho. okokusebenza akuzizwa ukunethezeka kepha yilokho esingakulindela kumkhiqizo ngale ntengo. Okokusebenza kuzwakala njengensimbi engagqwali kepha kulula kunalokho. Isikhathi kuphela esingaphendula uma sihlala isikhathi eside. Umpompi unenhloko enwebekayo njengamanye ompompi abaningi kodwa ngicabanga ukuthi abayisebenzisanga isiphethu ukuze ikhanda lingabuyisi ngokushesha njengabanye. Noma kunjalo, kusasebenza kahle. Umkhiqizo ufike usesimweni esifanelekile, ukupakisha bekukuhle. Ncoma kakhulu uma ufuna ompompi abithengekayo!
Ngisanda kuthuthela endlini entsha futhi usinki wasekhishini omdala ubemdala futhi eklwebekile futhi egqwalile. Ngemuva kokudweba, ngafaka le ompompi entsha. Inikeza ukubukeka kwesimanje futhi ngiyayithanda isipreyi sokudonsa. Kwakulula ukuyifaka (vele ulandele izinkomba).
Konke lokhu kubukeka futhi konke kuyasebenza. Iyakhanga futhi. Ukusuka esiphethweni esijwayelekile se-chrome, isibambo ezimbili, umpompi ophansi wasekhishini wentambo kuya kokuphambene kuyajabulisa! Intengo iyancintisana. Kulula ukuyiqondisa. Ngijabule kakhulu ngalokhu kuthenga.
umpompi omuhle, osebenza kahle
Isebenza kahle. Inani elimangazayo lentengo. Kade ngifuna ukushintsha umpompi wethu unomphela futhi lena iyasebenza futhi ibukeka iyinhle. Isifutho asidingi. Vele uqiniseke ukuthi unesisindo esiphikisayo sibekwe kahle.
Umpompi ungumkhiqizo omuhle. Kulula ukuyifaka uma ngabe isakhiwo sosinki sakho kulula ukusebenza ngaso. Kimi, ngidinga ukubeka phansi emhlabathini ukuyifaka. Kepha bekufanele.
Kuzofanele ngithi ngentengo ebengingaqiniseki ngayo ngokuthenga lokhu kodwa ngiyaqiniseka ukuthi ngikwenzile bekulula ukufaka imisebenzi njengoba bekulindelwe futhi bekukuhle njengompompi bakho bokugcina futhi kufanele ngithi ungabhali izibuyekezo ikakhulu ngoba ngiyakhohlwa ngakho-ke uma ngithatha isikhathi ukubhala lokhu kusho ukuthi bekukufanele futhi bengifuna abanye abantu kwisabelomali babone kulungile ukuthi bangaphuli ibhange ngenkathi belungisa ikhaya lakho
Intengo enhle yompompi omuhle. Ngisithanda kakhulu isici "sokuphumula". Kwakulula kakhulu ukufaka. Le yipompi yesibili engiyitholile evela kule nkampani, futhi bobabili bayathandeka!
Umpompi ohloniphekile wemali. Ukufakwa okulula, bekungadingi umpompi wabasebenza ngamapayipi, futhi akukho ukuvuza. Sibheke ukuhambisa unyaka futhi lokhu bekungukuthuthuka okungabizi kakhulu ekhishini
B *** eI-2020-08-
Ngifunde izibuyekezo ngazinika ithuba futhi ngiyaqiniseka ukuthi ngikwenzile, lokhu bekungukuthuthuka okuhle ekhishini lethu futhi intengo ayikholakali uma iqhathaniswa nezitolo ezinkulu zebhokisi.
Impela ukuthenga okuhle kakhulu. Kubukeka kubiza impela, kusezingeni eliphezulu futhi kuphakamisa ikhishi. Ukunwetshwa kuyamangalisa. Thanda ukuqeda. Umama ubekufuna lokhu futhi weneliseke kakhulu.
Lokho nje okucwiliswa ilondolo okujulile kwakudinga. Amathuluzi alula ukufaka kuphela ayisijobelelo esishintshekayo. Phillips umshayeli. Kuxhunywe akukho ukuvuza futhi okubanzi kuyajabula.
Le ompompi yabuyisa ikhishi lami! Kwenziwe kahle futhi kulula kakhulu ukufaka! Ngiye ngaba nokuvuza okungu-zero noma izingqinamba kuze kube manje! Ngisikisela !
Ngiyayithanda ipayipi lami elisha ngithenge 2 elilodwa lendlu yami nelinye lefulethi enginalo. Babukeka behle futhi basebenza kabi!
Kulula ukufaka, kufaka konke okudingayo. Inani elikhulu lemali, ungavumeli inani eliphansi likwenze ube novalo!
Singumuntu ojwayelekile ongenakho ukufakwa kwepayipi okwengeziwe njengohlelo lokuhlanza amanzi -ukufaka okulula. Ngiphinde ngibe neshalofu elisendleleni ukuze isisindo singakwazi ukuya lapho kungokwaso ngempela qiniseka ukuthi ungaphansi kwesinki sakho kucacile ukuthi kuzokwenza kube lula ukusebenza. I-Faucet ibukeka kahle futhi yakhelwe kahle. Ngiyayithanda ngokuphelele
Ngithenge le ompompi ukuvuselela usinki wami wasekhishini. Ngikhokhele umuntu ukuthi angifakele okuyinto engijabule ukuthi ngiyenzile. Ngithenga ezungeze. Oompompi Abahle.